यस्ता व्यक्तिमाथि सधैँ हुन्छ शनिदेवको कृपा, मिल्छ राजाको जस्तो सुख-सयल, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Krazy NepaL
November 19, 2021 106
शनि देवलाई सबैभन्दा रिसाहा देवताका रुपमा चिनिन्छ । जसलाई न्यायका देवता पनि भनिन्छ। शनि देवले व्यक्तिलाई उसैको कर्म अनुसार फल दिने गर्छन्।
Nextचिसोले गर्दा हात खुट्टाको जोर्नी, घुँडा दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्